Usuku lwabanesifo somdlavuza – EtiMnga 1, 2017 : isincoko, Theme, ezigxeka, Quotes, imiyalezo, Indlela Bhiyozela, Speech
College, amanqaku, isincoko & Phinda Uqalele, Ukubhala Tips
USuku lweAIDS lweHlabathi ibhiyozelwa nyaka ngamnye ehlabathini lonke ku 1st ka December ekukhuliseni ulwazi loluntu malunga AIDS (Isifo Immuno Imibala Syndrome). AIDS sisifo bhe uqale ngenxa usulelo of Human ukudodobala Virus (HIV). Usuku ibhiyozelwa yi imibutho karhulumente, NGO, uluntu kunye namanye amagosa ezempilo ngokuthi aququzelele kweentetho okanye namaqonga eengxoxo enxulumene AIDS.
UMongameli of United States wathi isaziso esisemthethweni zoSuku lweAIDS lweHlabathi kunyaka 1995 okwasungulwa alandelayo ngamanye amazwe kulolonke ihlabathi. Ngokutsho ukulinganisela rough, emhlabeni 25 kwafa abantu abavela 1981 ukuba 2007 ngenxa usulelo lwe-HIV. Kwanasemva kokuba ukufikelela kunyango lwe-antiretroviral kwiindawo ezininzi, emhlabeni 2 abantu million (Nangona 270,000 of total abantwana) ngo 2007 zaye abanesi sifo bhubhane.
celebration USuku lwe-AIDS kwiHlabathi Jikelele uye waba imihla zempilo imibhiyozo eyaziwa kumazwe ngamazwe. celebration USuku lwe-AIDS kwiHlabathi Jikelele unika ithuba isitshixo imibutho zempilo ukwandisa ulwazi ebantwini, kakhulu ukufikelela ukuba unyango kwakunye kokuxoxa amanyathelo othintelo.
USUKU LWABANESIFO SOMDLAVUZA 2017
Usuku lwabanesifo somdlavuza 2017 wayeza yabhiyozelwa ngoLwesihlanu, on 1st ka December.
USUKU AIDS WORLD IMBALI
USuku lwe-AIDS kwiHlabathi Jikelele waye libonwa kuqala yi-Thomas Netter noYakobi W. Bunn ngenyanga ka-Agasti ngo 1987. Thomas Netter and James W. Bunn bobabini amagosa ulwazi loluntu seNkqubo AIDS Global kwi-WHO (World Health Organization) e Geneva, Swizalend. Bona ekwabelwana ingcamango zabo malunga imini AIDS ku Dr. Jonathan Mann (KuMlawuli woMsebenzi the AIDS Global), lowo ivume ingcamango esicetyiswayo ukugcinwa USuku lwe-AIDS kwiHlabathi Jikelele nge 1st ka December kunyaka 1988.
celebration USuku lwe-AIDS kwiHlabathi Jikelele kwakugqitywe ngabo ukuba lubhiyozelwa rhoqo ngonyaka ngomhla 1st ka December ngokuchanileyo. Babecinga ukuba kufuneka isigqibo kude ngexesha lonyulo, iiholide Christmas okanye ezinye iiholide. Kufuneka kubhiyozelwa ngexesha xa abantu kunye namajelo eendaba ukuba ahlawule inzala engakumbi nakwa besasaza iindaba kulolonke ihlabathi.
Joint Inkqubo yeZizwe eziManyeneyo kwi-HIV / AIDS, eyaziwa ngokuba UNAIDS, weza ukusebenza kunyaka 1996 waza waqala nokukhuthaza emhlabeni. Endaweni yokuba kubhiyozelwa usuku olunye kuphela, LePhulo iWorld AIDS yaphehlelelwa yi-UNAIDS kunyaka 1997 ukunikel 'ingqalelo iinkqubo AIDS, unxibelelwano olungcono, zokuthintela izifo kwanokwazisa isifo ukufunda unyaka wonke.
Kwiminyaka ukuqala, imixholo USuku lwe-AIDS kwiHlabathi zaye swi kuphela abantwana kunye nabantu abatsha, kamva zazigqalwa sisifo usapho nawuphi na umntu naliphi iqela ubudala angaba ne HIV. ukusukela 2007, uSuku World Aids yaqalwa libonisa yi zokubeka pawu ze AIDS IRibhoni yiNdlu White.
USUKU AIDS WORLD UMXHOLO
UNAIDS waqalisa ekuhleleni iphulo uSuku lwe-AIDS kwiHlabathi Jikelele ukuba kubhiyozelwa kunye nemixholo ethile yonyaka ulwazi olungcono jikelele malunga nesifo. Nazi uluhlu zonke imixholo kunyaka osisilumko Day World Aids:
Umxholo yonyaka 1988 ngokuba iphulo World Aids Day waba, "Unxibelelwano".
Umxholo yonyaka 1989 ngokuba iphulo World Aids Day waba, "Youth".
Umxholo yonyaka 1990 ngokuba iphulo World Aids Day waba, "Women and AIDS".
Umxholo yonyaka 1991 ngokuba iphulo World Aids Day waba, "Ukwabelana Challenge".
Umxholo yonyaka 1992 ngokuba iphulo World Aids Day waba, "Ukuzinikela Community".
Umxholo yonyaka 1993 ngokuba iphulo World Aids Day waba, "UMthetho".
Umxholo yonyaka 1994 ngokuba iphulo World Aids Day waba, "AIDS kunye Iintsapho".
Umxholo yonyaka 1995 ngokuba iphulo World Aids Day waba, "Amalungelo ekwaBelwana ngayo, Uxanduva ekwaBelwana ngayo ".
Umxholo yonyaka 1996 ngokuba iphulo World Aids Day waba, "Enye World kunye One Ithemba".
Umxholo yonyaka 1997 ngokuba iphulo World Aids Day waba, "Abantwana Ukuphila Kwihlabathi ne AIDS".
Umxholo yonyaka 1998 ngokuba iphulo World Aids Day waba, "Force for Change: LePhulo iWorld AIDS kunye Abantu Abaselula ".
Umxholo yonyaka 1999 ngokuba iphulo World Aids Day waba, "Phulaphula, Funda, Live: LePhulo iWorld AIDS kunye aBantwana Abantu Abaselula ".
Umxholo yonyaka 2000 ngokuba iphulo World Aids Day waba, "AIDS: Amadoda Yenza Umahluko ".
Umxholo yonyaka 2001 ngokuba iphulo World Aids Day waba, "Ndiyakhatha; a. Uya"?
Umxholo yonyaka 2002 ngokuba iphulo World Aids Day waba, "Ibala Nocalucalulo".
Umxholo yonyaka 2003 ngokuba iphulo World Aids Day waba, "Ibala Nocalucalulo".
Umxholo yonyaka 2004 ngokuba iphulo World Aids Day waba, "Women, Girls, HIV and AIDS ".
Umxholo yonyaka 2005 ngokuba iphulo World Aids Day waba, "Stop AIDS: Gcina i Promise ".
Umxholo yonyaka 2006 ngokuba iphulo World Aids Day waba, "Stop AIDS: Gcina i Promise-uxanduva ".
Umxholo yonyaka 2007 ngokuba iphulo World Aids Day waba, "Stop AIDS: Gcina Lesithembiso- Leadership ".
Umxholo yonyaka 2008 ngokuba iphulo World Aids Day waba, "Stop AIDS: Gcina i Promise-Lead-ukuxhobisa-Ukukhulula ".
Umxholo yonyaka 2009 ngokuba iphulo World Aids Day waba, "Universal Access and Human Rights".
Umxholo yonyaka 2010 ngokuba iphulo World Aids Day waba, "Universal Access and Human Rights".
Lo mxholo ovela kulo nyaka 2011 ukuba 2015 ngokuba iphulo World Aids Day waba, "Makungabi: usulelo olutsha lwe-HIV zero. Kungabikho mkhethe. ababulawa Zero AIDS "
IMISEBENZI USUKU AIDS KWIHLABATHI
Iintlobo ngeentlobo zemisetyenzana yokukhangela kungenziwa ngomhla imini umbhiyozo World Aids ukuba ukwandisa ulwazi basasaze isigidimi umxholo wonyaka othile. Kuyimfuneko kakhulu ukuba ukwandisa ulwazi ebantwini njengoko kujoliswe kuko ephambili yale program. Eminye imisebenzi ebhalwe ngayo apha ngasezantsi:
abantu esekelwe ekuhlaleni kunye nemibutho kufuneka nabo ukuba bacwangcise imisebenzi USuku lwe-AIDS kwiHlabathi Jikelele, ukuba kuququzelela intlanganiso ecwangcisiweyo. It ingaqalwa kakuhle ukusuka kwiikliniki zengingqi, ezibhedlela, arhente inkonzo zentlalo, izikolo, Amaqela enkxaso AIDS and etc.
A isiganeko esinye okanye ukulandelelana kweziganeko ezizimeleyo nga kumiselwa ulwazi ngcono izithethi kwanababonisi ngokusebenzisa iiforam, eshukumisa, ubambisene zempilo, imicimbi yasekuhlaleni, iinkonzo ukholo, kwimiju-, amaqela block and etc.
Ingxelo zoluntu zingeniswe kwibhodi arhente olona nokuwuqaphela USuku lwe-AIDS kwiHlabathi Jikelele.
iirozeti Bomvu kufuneka ayenxiba okanye lusasazwe kwabanye ukumakisha ithemba kwizikolo, sites umsebenzi okanye amaqela oluntu. iirozeti Electronic nazo wababela zomphakathi.
Yonke imisebenzi (ezifana ukuboniswa DVD neesemina zothintelo Aids) lamashishini, izikolo, imibutho yezempilo, abefundisi kunye arhente zikamasipala kufuneka bakhuthazwe ukuba umsebenzi wabo omkhulu.
A emvuselelweni ikhandlela unako kuqhutywa epakini yoluntu okanye arhente elikufutshane nalapho singers, abaculi, ukuwina, iimbongi, thamsanqa ibali kunye etc ababeza kusasaza umyalezo yothintelo Aids ngokusebenzisa umculo esonwabisa.
ulwazi USuku lwe-AIDS kwiHlabathi Jikelele unako kusiwa linxibelelanise iweb site arhente yakho.
Zonke iziganeko ezicwangcisiweyo kunye nemisebenzi kufuneka sele isasazwe nge-e-mail, newsletter, entengiso okanye bulletin elektroniki.
Abantu bazazi ngokubonisa imiboniso, iipowusta, videos, ezaziso, iincwadana ze-HIV / AIDS and etc.
imisebenzi USuku lwe-AIDS kwiHlabathi Jikelele angaba baziswe iqela elikhulu labantu nangoko nge-blog, Facebook, Twitter okanye ngokusebenzisa ezinye websites social media.
Zifake kwamanye amaqela yokubhiyozela uSuku lwe-AIDS kwiHlabathi.
A umbhiyozo ikhandlela nga kuqhutywa kwimemori umntu wafa ngenxa HIV / AIDS.
bayakhuthazwa iinkokeli zonqulo ukuba athethe into malunga zobandlululo AIDS kunye nehlazo.
Inkonzo ingaqalwa ukubonelela ngokutya, yokufihla, zokuhamba, nokuba abangane abantu abane-HIV / AIDS. Kananjalo bayamenywa umsebenzi wentlalo, zonqulo okanye eminye imisebenzi ukwandisa yokuziphatha kwabo.
ifundwe: USUKU LWEGROUNDHOG 2017 Quotes, images, ezigxeka, wiki, shadow
IINJONGO USUKU AIDS KWIHLABATHI 2017
Injongo yokubhiyozela World Aids Day ngonyaka ngamnye ukuxhasa kakuhle States iLungu ukwenzela ukwakha imigaqo-nkqubo kunye neenkqubo ezintsha ngempumelelo, ukomeleza iinkqubo zempilo kwakunye ukwandisa umthamo kumacandelo ezempilo ukuya HIV / AIDS. Ezinye iinjongo eziphambili ze-World Aids Day zidweliswe ngezantsi:
Ukukhokela kwamazwe angamalungu ukuba jikelele ukwandisa amanyathelo okuthintela kunye nolawulo lwe-HIV / AIDS.
Ukunikela angamalungu ngezobugcisa lokuphumeza isicwangciso sokuthintela, ukunakekela kunye unyango lwe-HIV / AIDS kuquka ukuhlolwa, iingcebiso unina yokudlulisela usulelo ukuba umntwana, ulawulo-STI nonyango lwe-antiretroviral.
Ukuze abantu bazi malunga amayeza antiretroviral okanye ezinye yorhwebo leyo inokunceda ukuba alwe HIV / AIDS.
Ukubandakanya amaqela peer kweli phulo ukuze ufumane isiphumo kakhulu ngempumelelo.
Ukuze ukhuthaze abafundi abaninzi abavela kwizikolo, iiyunivesithi kunye nezakhiwo zasekuhlaleni ukuze igalelo kwi amakhuphiswano aququzelelwe for the AIDS.
Ukuze ukunciphisa nokulawula inani lezigulane abosulelwe yi-HIV / AIDS kwakunye ukukhuthaza amaqela kontanga condom.
USUKU AIDS KWIHLABATHI ezigxeka, Quotes nemiyalezo (Usuku lwabanesifo somdlavuza 2017)
"HIV / AIDS akanayo imida".
"Play Sex yam Safe uthathwe ngaphandle ngenxa yokuba abahlalutyi babecinga ukuba akholelwa. Yaba umdlalo apho kungekho mntu wakha AIDS, kodwa abalinganiswa bathetha ngayo uza ukutshintsha ubomi babo "njani.
"Ezinceda Small kubantu, aid omkhulu kwinginginya ".
"AIDS sisifo ebuhlungu kakhulu. Le ngxoxo nge-AIDS 'ukuba uhlobo lwempindezelo kaThixo crap ".
"Nika uthando umntwana, ukuhleka noxolo, yini AIDS ".
"Enye indoda ingakwazi owanika AIDS emfazini wakhe kanye into kuphela benza kiss I ndiyazi".
"Ukuba kubagweba abantu ukuba akukho xesha ukubathanda".
"Makhe ngokusasaza H.I.V./AIDS kwaye Asinakukufihla, kuba indlela ekukuphela ukuyenza ivele ngathi izifo ezinjenge-TB, ezifana nomhlaza, usoloko ukuba aphume athi umntu ufile ngenxa H.I.V./AIDS, yaye abantu baya kuyeka malunga njengento engaqhelekanga ".
"I-AIDS sisifo ukuba kunzima ukuthetha ngayo".
"Ndazitshisa phezu AIDS kunye akenzanga namnye umsebenzi AIDS embalwa iminyaka. I Wacaphuka kangangokuba Abantu ukufumana esi sifo ukuba akukho mntu angakunika - kufuneka ukuba ndiphume ndiye kusithabatha "!
"Unyana wam okhe wabulawa zi-AIDS '.
"Ngenxa yokunqongophala kwemfundo kwi AIDS, lobandlululo, ukwesaba, ukuzibonela, amanga Zingafanelana ".
"Awukwazi ukufumana AIDS ukusuka ukwanga okanye ukuxhawula okanye isidlo kunye nomhlobo".
"Lento AIDS kuyinto eyoyikisayo. Ndiyathemba ke musa ukuba kube ".
ifundwe: INDLELA ukufumana ABABHALI FAL MFUNDO?
malunga ne AIDS
AIDS (yaziwa syndrome intswelo omzimba okanye lufundiwe immunodeficiency syndrome) zibangelwa yi-HIV (human immunodeficiency virus) ezithi zihlasele amajoni omzimba ngayo umzimba womntu. Esi sifo okokuqala phaya kunyaka 1981. Yayichongwe kuqala ngegama AIDS ku 27th ka July ngonyaka 1982.
usulelo lwe-HIV kube lula idluliselwe komnye umntu ukuya komnye ukuba baye baqhagamshelana ngonaphakade ngqo ngokusebenzisa ndizayo uxakaxa, nokunye okanye igazi. Kwixesha ekuqaleni, kwakukho eninzi ibala loluntu ukuba abantu abane-HIV / AIDS. Ngokutsho uqikelelo, kuye kwaphawulwa ukuba ngeenxa 33 million abantu baye bangenwa i-HIV kunye 2 kwafa abantu ngenxa kulo nyaka ngamnye.
HIV yintsholongwane elihlasela T-iiseli zamajoni omzimba kwaye ebangela esi sifo eyaziwa ngokuba AIDS. Ifumaneka kwi kwiincindi zomzimba womntu njengegazi, isidoda, iincindi zelungu langaphantsi lobufazi, ubisi lwebele onesibetho leyo ukuhambisela abanye kumfowunelwa ngqo ezifana igazi, ukwabelana ngesondo ngomlomo okanye iimpundu, isondo lomgqundu, ngesondo kwilungu lobufazi okanye injecting iinaliti ezingcolisekileyo. It ukuhambisela usana yi abafazi abakhulelweyo ngexesha lonikezelo okanye lokuncancisa.
It wasungulwa kwi 19th yaye 20th leminyaka kummandla kumbindi-ntshona Afrika. Eneneni akukho naluphi na unyango yona kodwa ikhondo sifo kunokuba lincipha phantsi yi ayokufumana unyango.
Iimpawu kunye Iimpawu ze-HIV / AIDS
Umntu ne-HIV / AIDS miqondiso ilandelayo kunye neempawu:
Ulele ngexesha ebusuku
kodwa, kwiimeko ezininzi le sifo impawu Ekuqaleni yanyamalala kangangeminyaka emininzi apho intsholongwane kaGawulayo ityala umonakalo amajoni omzimba leyo asikuko nokuba kuyabulala. Umntu onesifo ze avakalelwa naziphi na iimpawu ngeli xesha kwaye kubonakala esempilweni.
kodwa, ngasekupheleni ibakala yosulelo lwe-HIV (xa intsholongwane buthathaka amajoni omzimba ukuba alwe nayo) umntu iphuhlisa yokugula ne AIDS. Lomntu kunye usulelo lamva waqala mpawu zilandelayo kunye neempawu:
fever (ngaphezu 100f)
urhudo (zokunyanzelisa ezingapheliyo)
amabala amhlophe phezu ulwimi kunye nomlomo
Esophagitis (ukudumba linings aphantsi umphimbo)
Kaposi nee-, umhlaza womlomo wesibeleko, amaphaphu, ezinqeni, kwesibindi, intloko, entanyeni kwaye umhlaza amajoni omzimba (lymphomas).
meningitis, kobuchopho peripheral neuropathy
toxoplasmosis (usulelo wobuchopho)
Kukho ezinye iintsomi leyo zisasazwa kwi kuluntu malunga ZONCEDO. Aids akazange isasazeka shake ngesandla, ukwanga, uthimla, touch ngolusu okanye ukusetyenziswa yangasese enye.
Into Special For You ::
5Mashi, 2018 Sankashti Chaturthi Moonrise Ixesha In India (Moon Rise Time 5 EyoKwindla)
TIPS INQAKU UKUBHALA - 6 AMALUNGISELELO UKUBHALA A IZINCOKO ENKULU
6 Tips Of Ukufumana Writers Izincoko
INDLELA BHALA lokuwina FAL COLLEGE SICELO?
Top 10 Best spy zokusebenza Android
Ileta eya kumhleli ngeengxaki ukungena kwamanzi ngexesha zemvula
« Ileta eya kumhleli ngeengxaki ukungena kwamanzi ngexesha zemvula
Popular Colleges Phantsi DU (University of Delhi) »
Sridevi eseyi, Biography, Profile, Family, Super-hit Movies, kwelungiselelo (Shridevi Bollywood Actor)
Popular Colleges Phantsi DU (University of Delhi)
© 2018 · akukho Velocity · yakhelwe By Charmin Patel.